Ọkachamara Semalt: 7 Surefire SEO Dị Mkpa Ị Na-achọ Mfe Ọkachamara Nhọrọ Họrọ Van Een CMS
Na ntinye ederede site na ntinye aka n'Ịntanet Management System (CMS) ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta na ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-eleba anya n'ịntanetị-ahịa-ahịa, ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịbanye na nke gị ahịa, ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị ga-achọpụta na ị na-achọpụta ya ozugbo. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ na ebe nrụọrụ weebụ na-achọ Search Engine Optimization (SEO), ị na-achọ ịchọta ọrụ site na online.
Ọ bụrụ na ị na-eleba anya na SEO na SMM na-aga ọdịnaya management system, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-aga. Site na meeste njikwa nchekwa usoro na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mfe, ị ga-ahụ na ị na-ahụ ihe ọ bụla dị na Google na ọkwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na CMS na-arụ ọrụ, nke a na-emeghị emezi, Max Bell, nke Client Success Manager nke Ihe mgbochi , okwu verstrekt.
1. H1 mkpado, paginatitels en metabeschrijvingen
Ebe nrụọrụ weebụ Gọọmenti Google bots na ị nwere ike ịbanye na saịtị gị na saịtị. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-aga agha. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị nweta mkpado h1, ị ga-enwe ike ịmepụta aha mkpado h1, nke a na-egosi na ị nwere ike ịlele (lezen: optimaliseren). Na-enyere gị aka na-enyere gị aka na-arụ ọrụ ọdịnaya njikwa na-arụ ọrụ.
2. Vermogen na Alt na-egosi na ị na-agụ
Jikwaa ozi nke zoekmachine informatie banyere oge ọ bụla ị ga - enwe
3. Na-ederede na koodu aha
Na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla na weebụ website. Nke a na-eme ka ọ dị ugbu a na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ị na-enweta ihe kasị mma site na saịtị site na SERP staat. Het CMS bụ ihe kacha mma na-eme ka ndị na-emepụta koodu nsonaazụ ndị na-arụ ọrụ na ha..Ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga -
Het na-enyere gị aka na CMS na overwegen na-eme ka gị na ndị ọzọ na-enweghị ike ịbanye na nke ọ bụla n'ime ha. Nke a bụ ihe kasị mma nke zoro ezo nke UX. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị iche iche, ị ga-ahụ ihe dị iche iche.
Om na slagen na SEO, na nke URL usoro ị na-emekarị na-eme ihe karịrị ihe ọ bụla na koodu. N'otu oge, a na-eme ka ndị mmadụ na-atụgharị uche na ya.
6. Canonische nsogbu na dubbele inhoud
Nke a na-enye nsogbu dị iche iche ma ọ bụrụ na ị nwere njikọ na URL URL. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe ọ bụla nke ihe wijzen. Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla, ị nwere ike ịchọta ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-ele anya na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu banyere okwu dị iche iche. Als gevolg daarvan bụ ihe ọ bụla na-enyere gị aka ịchọta ihe niile ị na-eche banyere ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọta ihe ọ bụla na-arụ ọrụ System Management System, bụ ụzọ middel van 301 aka. Zorg ervoor na CMS na-agba mbọ na-agba mbọ na-agba ọsọ.
7. Add-on, plugins na modulu
Na-akpaghị aka bụ akụkụ nke ozi ọma na CMS. Het a plugins zoals SEO nke zelfs WordPress mogelijk maken.
Om na slagen na azụmahịa online, ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-akwado ndị ọzọ. Ihe ọ bụla ị na-ekwu bụ na ọ na-eme ka ịntanetị ahịa campagnes ọ bụla na peeji nke nke website na-akwalite. SEO na-agbanyeghachi na njem. Nsogbu nke nsogbu na-ezute nke Systems Management Systems na ihe ndị ọzọ na-eme ka ị na-aga. Na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọ bụla nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe na ọdịnaya ọdịnaya systemeem Source .